Abafundi bathule uhlelo lwabo e-Fairvale Secondary School lapho befundise abafundi abenza iBanga lesi-9 ngobungozi bokudla izidakamizwa.
Abafundi uMnu Sabelo Ntenza noNksz Snethemba Mhlongo bavule uhlelo, kwathi uNksz Vamumusa Ngwane, uNksz Minenhle Mpanza, uNks Marisha Ramaraj noNksz Neema Muyimu bakhuluma ngokusetshenziswa kwezidakamizwa.
Inkulumo yabo ithinte izinhlobo ezehlukene zezidakamizwa ezitholakala emphakathini, yaphinde yaveza imiphumela emibi yezidakamizwa emzimbeni womuntu. Kuphinde kwenziwa nomdlalo weshashalazi omfishane ngokusetshenziswa kwezidakamizwa.
Isikhulumi esiqavile, uSister Nomagugu Mlangeni wasemtholampilo i-Austerville, wazise abafundi ngosizo olutholakala emtholampilo lwabantu abasha abahlushwa yizidakamizwa. Uphinde wathinta izihloko ezibalulekile zokukhulelwa kwentsha, ubugebengu nenhlanzeko.
‘Abafundi baveze ukusetshenziswa kwezidakamizwa njengenye yezinkinga ezinkulu emphakathini nento abakholwa wukuthi ingenza ushintsho kuyona,’ kusho uthisha wase-UKZN uSilingene Ngcobo. ‘Ulwazi olwethulwe kubafundi belulula, kulula ukuluqonda kepha futhi lugqugquzela impilo enhle nokugwema ukugula.’